Ogaden News Agency (ONA) – Dagaalo Cadawga Lagu Naafeeyay iyo Baabuur Lagaga Gubay Goobaha Dagaalka – Xarunta Dhexe
Dagaalo Cadawga Lagu Naafeeyay iyo Baabuur Lagaga Gubay Goobaha Dagaalka – Xarunta Dhexe
Wararka aan ka helnay Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa ka warbixiyay dagaalo badan oo ciidamada gumaysiga khasaare laxaadleh lagu gaadhsiiyay. Dagaaladan aan helnay warbixintooda ayaa ka mid ah dagaalada sida joogtada ah uga socda ciida Ogadenia oo N/hurayaasha CWXO ay ku difaacayaan dadka shacabka ah kagana xoraynayaan cadawga kusoo duulay dalka hooyo.
Khasaaraha la hubsaday ee cadawga ayaa laga dilay ciidan gaadhaya 30 askari oo darajooyin kala duwan lahaa iyo dhaawac badanoo ay goobaha dagaalka kala tageen. Waxaa kaloo lagaga gubay dagaaladaa laba baabuurta ciidamada qaada oo wixii saarnaa ay noqdeen qaar bakhtiyay iyo kuwa dhaawac ahaa.
Dagaaladaa ayaa waxaya udhaceen sidan.
5/12/14 Xamardeeq oo dagmada Qabridahare ee xarunta Gobolka Qoraxay katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 2 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
7/12/14 Qudhacaboorame oo Qabridahare katirsan dagaal CWXO iyo guwa gumaysiga kudhexmaray waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 4 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
8/12/14 Dagmada Garbo ee Gobolka Nogob waxay Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenia kugubeen 1 baabuur oo nooca Uuraalka ah waxaana ku halaagsamay dhamaan ciidankii saaraa.
10/12/14 Ganbacaseeye oo damada Baabili katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 4 askari 6 kalana waa lagaga dhaawacay.
13/12/14 Waldaygabooraale oo dagmada Fiiq ee xarunta Gobolka Nogob katirsan dagaal culus oo CWXO iyo kuwa cadawga ku dhexmaray waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay inta lahubsaday 6 askari 7 kalana waa lagaga dhaawacay.
17/12/14 Arooy oo dagmada Galaalshe katirsan dagaal xoogan oo kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga loogu gaystay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
17/12/14 Haadaanta oo Dagmada Dhagaxmadow katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 4 askari 6 kalana waa lagaga dhaawacay.
17/12/14 Labinaag oo Qabridahare katirsan kamiin ay CWXO ka xidheen waxay ku gubeen 1 baabuur oo noocyada ay ciidanka cadawgu adeegsadaan ah waxaa kubakhtiyay dhamaan wixii saaraa.
17/12/14 Misigiyomareexaan oo Fiiq katirsan dagaal aad u culus oo ay CWXO kuqaadeen waxay ciidanka cadawga kaga dileen 6 askari 8 kalana way kaga dhaawaceen.
17/12/14 Leedilay oo Birqod katirsan waxuu dagaal ku dhexmaray 2 ciidan oo kuwa cadawga kawada tirsan waxayna iskaga dileen 3 askari 4 klana way iska dhaawaceen.
18/12/14 Birqod waxaa kagoostay 3 kamid ah ciidamada hawaarinta kuwaas oo hubkoodiina lagoostay.
21/12/14 Labimaloog oo dagmada Gunagado katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga Itoobiya lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.